नमूना व्यक्तिगत विकास योजना - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | फरवरी 18, 2018 | व्यक्तिगत विकास योजना, व्यक्तिगत विकास |0|
1 म अहिले कहाँ छु?
2 म कहाँ हुन चाहन्छु?
3 म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु?
4 नमूना व्यक्तिगत विकास योजना
4.1 1. अब म कहाँ छु?
4.2 2. म कहाँ हुन चाहन्छु?
4.3 3। म कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छु?
4.4 नमूना व्यक्तिगत विकास योजना
व्यक्तिगत विकास योजना तपाईमा निर्भर धेरै फरक स्थितिका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ; त्यसैले यो जटिल हुनु हुँदैन वा तपाइँ चिन्तित हुन कारण छैन। नमूना व्यक्तिगत विकास योजना तपाईले छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू ठेगानाहरू डाउनलोड गर्नका लागि उपलब्ध गराउनुभएको छ।
यो के गर्नुपर्दछ तपाइँले स्पष्ट लक्ष्य र तपाइँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने विधि दिनुहुन्छ। त्यसोभए एक प्रभावी व्यक्तिगत विकास योजना सँगै राख्नको लागि, तपाईंले यी तीन प्रश्नहरूको बारेमा सोच्न पर्छ:
म अहिले कहाँ छु?
म कहाँ हुन चाहन्छु?
म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु?
यी तीन प्रश्नहरूले तपाईंको प्रगतिको महत्त्वपूर्ण चरणहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ; तपाईंको छोटो अवधि, मध्यम अवधि र दीर्घकालीन गोलहरू।
आउनुहोस् हामी तीनवटा प्रश्नहरूलाई हेरौं र कसरी सफल व्यक्तिगत विकास योजना बनाउँदछौं।
1. अब म कहाँ छु?
तपाईंले आफ्नो कार्ययोजना सुरू गर्नु अघि तपाईको हालको अवस्था निर्धारण गर्न तलका प्रश्नहरू विचार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ:
म केमा राम्रो छु?
मलाई केमा काम गर्न आवश्यक छ?
मलाई के सहयोग गर्न सक्दछ?
के मलाई रोक्न सक्छ?
निम्न उदाहरण प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि कार्यलाई दोहोर्याउनुहोस् तपाईंको आफ्नै परिस्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्न।
म केमा राम्रो छु? बक्स 2
उत्कृष्ट मौखिक र लिखित संचार कौशल
आयोजना परियोजनाहरु र घटनाहरु
उन्नत आईटी कौशल कागजी कार्य पूरा गर्दै
अतिरिक्त कार्यहरू लिदै
मलाई के सहयोग गर्न सक्दछ? बक्स 4
नेतृत्व कोर्समा भाग लिदै
1-2-1 अन्तर्वार्ताहरू सञ्चालन गर्दै
कार्यहरूको लागि समयसीमा सेट गर्दै समय को आभाब
माथिको नमूना व्यक्तिगत विकास योजना शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू भन्दा (पेटी 1 हेर्नुहोस्) ब्यवसायिक कौशलमा ध्यान केन्द्रित गरेर (बक्स2हेर्नुहोस्) आफ्नो रोजगारीको सम्भावना सुधार गर्न चाहने कसैलाई लागू हुन सक्छ।
यो व्यायाम कार्य-आधारित शिक्षा उपयुक्त उत्तर हो भनेर पहिचान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि यसमा प्रमाणहरू र ज्ञान जम्मा गर्नु पर्दछ जुन काम-स्थितिमा दिनको आधारमा प्राप्त गर्न सकिन्छ (बक्स3हेर्नुहोस्)।
माथिको नमूना व्यक्तिगत विकास योजनाले सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गर्दछ जुन नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न र समीक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ (बक्स4हेर्नुहोस्)।
2. म कहाँ हुन चाहन्छु?
यो प्रश्न सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र एकै समयमा सबैभन्दा धेरै विचारको चाहिने प्रश्न पनि यही हो। तपाई एक हुनुहुन्छ जो यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, तपाई सचेत हुनु आवश्यक छ तपाईले समाधान खोज्न मद्दत पुर्‍याउने धेरै कुराहरु छन्। आफैलाई प्रश्नहरू सोध्नु प्रासंगिक विचारहरू आरम्भ गर्ने राम्रो तरिका हो (जस्तै):
मलाई के गर्न मन पर्छ?
(मेरो जागिरमा, एक शौकको रूपमा…।)
मेरो उद्देश्य के हो?
(पदोन्नति, व्यक्तिगत विकास, एक योग्यता प्राप्त गर्दै)
मसँग के सीपहरू, अनुभव र / वा योग्यताहरू छन्?
(यी मध्ये केही स्थानान्तरण योग्य हुन सक्छ।)
मेरो लक्ष्य पुरा गर्न मलाई कती समय लाग्नेछ?
के मेरो जीवनशैलीमा कुनै आसन्न परिवर्तनहरू छन्?
(नयाँ रोजगार भूमिका, विवाह, बच्चाहरू…।)
मेरो अन्तिम लक्ष्य के हो?
(एक योग्यता, व्यक्तिगत सन्तुष्टि, क्यारियर विकास।)
म कसरी मेरो सफलता मापन गर्न सक्छु?
(मान्यता प्राप्त योग्यताहरू, व्यक्तिगत लक्ष्यहरू… ..)
के त्यहाँ त्यस्तो कोही छ जो मलाई मद्दत र सल्लाह दिन सक्छ?
(लाइन प्रबन्धक, टीम सहयोगी, साथी वा ट्यूटरहरू।)
एकचोटि तपाईंले सबै कारकहरू विचार गर्नुभयो, तपाईं भविष्यको लक्ष्यमा निर्णयमा आउनुहुनेछ। यो एक एकल लक्ष्य, वा धेरै साना लक्ष्यहरू हुन सक्छन् जुन अन्तिम समाधान बनाउँदछ।
3.म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु?
तपाईको लक्ष्यहरू पहिचान गरिसकेपछि, तपाई अब "म कसरी पुग्न सक्छु?" प्रश्न सम्बोधन गर्न तपाईको कार्यलाई "काट्ने आकारका टुक्राहरू" मा विभाजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाइँको समग्र उद्देश्य को दृष्टि नगरीकन तपाइँको योजना लाई कार्यमा राख्ने एक प्रभावी तरीका हो। तपाईंको मार्गमा साना सफलताहरू प्राप्त गरेर, तपाईं बढि प्रेरित हुनुहुनेछ र यसैले अन्तिम लक्ष्य पूरा गर्ने मौका बढाउनुहुनेछ।
सबै भन्दा राम्रो तरिका तपाइँको कामलाई व्यवस्थापन योग्य भागहरूमा व्यवस्थित गर्नुहोस् छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन उद्देश्यहरू सेट गर्नु हो।
म अहिले कहाँ छु? म त्यहाँ कसरी पुग्न सक्छु? म कहाँ हुन चाहन्छु?
(छोटो अवधि का उद्देश्य) (मध्यम अवधि उद्देश्य) (दीर्घकालीन उद्देश्य)
याद गर्नुहोस् कि तपाईंको व्यक्तिगत विकास योजना एक सक्रिय कागजात हो। त्यसकारण तपाईंको छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन उद्देश्यहरू संशोधन योग्य छन् र नियमित आधारमा समीक्षा गरिनुपर्दछ कि ती अझै पनी उपयुक्त छन् भनेर निश्चित गर्न।
तपाईको योजना परिवर्तन गर्नमा कुनै गलत छैन, प्रदान गर्दै तपाईंले आफ्नो नयाँ लक्ष्यहरू प्रतिबिम्बित गर्न तपाईंको योजना अपडेट गर्नुभयो र तपाईं आफैंलाई सान्दर्भिक प्रश्नहरू सोध्नुभयो। यो गरेर तपाईको योजना एक प्रभावी उपकरण बन्न जारी रहनेछ जुन तपाइँको व्यक्तिगत विकासलाई समर्थन गर्दछ।
तपाईंको डाउनलोड गर्नुहोस् व्यक्तिगत विकास योजना टेम्प्लेट अब र यसलाई तपाईंको आफ्नै अनुकूलित कार्य योजना बनाउन प्रयोग गर्नुहोस्।
निजी विकास क्याफेमा हामीलाई थाहा छ कि ज्ञानको साथ गर्नु पर्ने सब भन्दा राम्रो चीज भनेको यसलाई पार गर्नु हो। के तपाइँ अरूलाई मद्दत गर्न तपाइँको अनुभव साझेदारी गर्न वा तपाइँको ज्ञानमा पार गर्न चाहानुहुन्छ?
सायद तपाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहानुहुन्छ वा तपाईले सोच्नु भएको प्रश्नको उत्तर छ भन्ने लाग्छ। कृपया तल तिनीहरूलाई सबमिट गर्नुहोस् र हामी समीक्षा गर्नेछौं, त्यसपछि तपाईंको टिप्पणीहरू थप्नुहोस्।
पछिल्लोअधिक अन्तर्वार्ताको सफलता प्राप्त गर्नको लागि CV मा झूट बोल्नुहोस्
अर्कोशीर्ष रोजगार खोज वेबसाइटहरू जसले परिणामहरू पाउँछन्